Meles Zenawi, Abaayi Tsehayee, Dr Mokonnon Golaasaa fi Yaregal Aishashum Yakka fixiinsa duguga sanyi Oromoo irratti bara 2008 rawwatanf mana murti addunyaa (ICC ) dhiyachuu qabu.
Gabassa Gummi Paarlamaa Oromoo Monday, July 25, 2011 10:43 AM
Harka fuunee kabajamoo, qabsa'oota fi sabboontota Gumii paarlamaa Oromoo maraaf.
yeroo xalayya kana isinnif barreessuu gammachuun koo heeduudha. Yeroo darbee FB Gummi Paarlamaa irratti wal barree akka ani waa'ee duguugama dhala oromoo ilaalchisee / genocide/ caarraan anaaf kennitaan turtan, baay’ina hojii harka gara afaanitiif jecha dhiifama isin gaafacha yaada koo akka armaan gaditti ibsachuun yaalaa.
Akkuma beekamuu kunnoo inni jedhamu kunoo ta'uunsa hin oollee paartiin bicuun biyya ethiopia bituuf haala mijeeffatuu eenyuu jala dhokata mitti. Bara 2003 dec 13 gochaa inni uummata Gaambellaa irratti godhe sammuu uummataa guutumma biyyatti jala dhokata mitti. Namichi Abbayi Tsehayee Jeedhamu Beeneshanguli fi Gambela Bulchuu ykn to'atuu amoo Beeneshanguliin hidhjachisee Oromiyaa irrati dulchisun Oromoo lafa isaani irra buqisun Frota isaa Tigireefi keena jira, Konkolata keenun loltuu fi Meshaa kan Beeneshangulif deebisaa jiru ilee Dalgala lafa Oromoo qabatee jiru Fira Abbayi Tsehayee Tigirticha. Abaayi Tsehayee Oromoo fi Oromiyya balessuuf wara karoorftan keessan nama 1faa dha. Kunis saba kotiif hin oollee gaafa caamsa 17 may 2008 ganama suubii kan uummata oromoo godina wallagga bahaa, aanaa saassigga bakka hora waataa kaambii 4ffaa fi kaambii 8ffaatti mudatee akkasumaas Baloo bakka jedhamutti, kan inni mudatee asi qofa mitti bakki kun garuu haalli mudannoo isaatti suukanneessadha. Baloo, Bareedaa, soogee, Angar guttin...
karoora kana geggeessuuf mootummaan wayyaanee akka tasa utuu hin taanee itti yaadee waggoota 4 kaasee qophii guddaa gochaa turee. Namticha Dr mokonnoon jedhamu naannoo arjootti kan dhalatee mana oromootti kan baratef afaan oromoo sirritti dubbachuu kan danda'uutti fayyadamee, yeroo paartiin mormitoota bara 2004- 2005 duula na filadha ba'an. konkoolata land cruser kenneef saba waggaa hedduuf wal kabaje walii wajjiin jiraatuu dabballoota haasa dnda'an filatee uummani oromoo isin ajjeesa ture, laftii wallagga hedduun kan keessan turee jedhee waa'ee duula Abbaa Xoonee maal akka jedhamuu hunda soban gowoomsee jibba gidduutti facaasee.
Shaanqallaa jechuun maqaa oromoon isinif kennedha, oromoon tokko haga nama shani jechuudhaan akka isaan jibbanif uummata kana wajjin wal fincilan karoorfatee. Duula dabballuummaa kana bakka isaan buna, faarsoo dhuganitti mana irra deemaani barsiisani, lafa adamoo, walga'ii kkf bakki naannoo ambooti sanqallee jedhamuu kan keessan kanaaf inveesteroota oromoo asi jiran of irra ari'a. kkf wagga afuri ol erga itti qopha'ee paartiin biyya bulchuu dhuma irratti meeshaa waraana kam iyyuu naannoo sanatti akka hin to'atamnee godhee iccitiin hidhaachiisee haga boombiitti.
Inveestooroti achii keessa jiraan harkii caalaan habashaa waan ta'aanif akka isaaniin fincilaan godhee. dureeyyooti sun kanneen warra GG jedhamuun hadheeffatama turan abbaa qabeenya BGI naqamtee, fi Ayyalee daabboo, Sebsibee,... inveesteerooti kun meeshaa qonnaa fakkeessani meeshaa hedduu wajjiin polissi magaalaa naqamtee boombii fi klaash baarmeela sakkatta'ee argeera, mercedisii SEBSIBEE mucaan isaa konkolaachisuu mana hidhaa Naqamtee turee ragaadha. Akka ajjajii kennameefitti uummatii gumuz irra jireessi dhiiroota kan ta'aan barii suubii ka'aani uummata oromoo ganda hora waataa goduu keessa jiraatan itti cabsanii namni tokko haga nama torbaa ajjeesee saddettaffa 'Obsi ! oromoon ni obsaa' jedhee dhiisee /sokka/ deemaa. haati ulfa yoo taatee keessa baasee ajjeessa. abbaa manaan haadha mana keessa kalee baasee nyaadhuu jedha humnaan yoo didee ni du'a yoo nyaatee ni maraata. torba maatiin jala dhumee saddeettaffa inni hafee hedduun ni maratan kaneen maatii bira hin jiree mana baruumsa iddoo bira jiranis akkasuma ni maraatan. mana irratti gubuu qabeenyaa saamuu abbaa dhaan intala kee wajjiin ciisii jechuu, dhiigaa da'immanii dhugii jedhani keennuufi baayyedha yaa dhiiroo haa hafuu mal godhu.
Guyyaa tokkootti ragaa hiriyyaa koo irrigationi site oromiyaa uummata harargee achi qubateef hojjeechisaa jiruu akka naaf kenneetti anis barreessuu koo sagaleedhaan, suuraa/ fakkoo vidiyoo dhaan deggeeree seenaa kanaaf ga'umsa yoon hinqabnee ijoollee ta'eellee galmeessuu ittumaan fufee... ganama tokkootti haga 400 kan tilmaamamuu muxux jedhee akka nama keelloo ciruutti akka waan Rabbii hin uumneetti haxa'amee.
Gorfamanii jiruu waan ta'eef ragaa/ evidense kana sabaaf addunyaa jala dhoksuuf, silaa preessiin mirga hin qabuu midia'n biyya bakkee maaltuus dhaqee arga oromiyaan noo balloodha. tokkoo tokkoon lagatti gadi guuraan akka saree maraatuu, kaan allaattiitu awwaalee, kaan warabeessaa fi bineensa daggalaa kaan bishaantuu dhiigaa isaa baatee deemaa inni keessa bu'ee, uummatiis dheebuu lagatee...
Inni du'e, du'ee inni maraatee maraatee, inni oolee of olchuuf gara magaala naqamteetti baqachuu itti fufee walumaa gala qabalee achii keessa jiruu tokkoon tokkoo isaa nama haga dhibba afur akka simatee yeroof gargaaruu bulchaan magaalaa naqamtee seera baasee beeksisee sababi isaa yoo iddoo tokkotti baayyatan icciti isaanituu ba'a ykn media alatuu argaa waan ta/eef
Amma nama 12,000 tu buqqa'ee baqatee kan lubbuun hafee. uummati Magaalaa Naqamtee gungumeee socho'uu jalqabee kanaan fedral polissi dhukaasa banee uummata sodaachisuu jalqabee kanaan barata TTC Naqmtee waggaa 3ffaa rasaasaan magaalaa keessatti mucaa Gimbii magaalaatti dhalatee ajjeessani inni hospitaala Naqamteetti lubbuun keessa ba'e.
uummataa xiyyaan rukutamee, rasaasan waadamee, billaa, gajamoo fi qottoon ajjeefamee keessa kan lubbuun keessatti haftee gargaarsa duraa dhabee illee hedduudha. ambulaansiin ergameef hin jiru konkolaataan uummataa seenuu sodaatee, ta'uus kan carra argatee konkotaan hospitaalaa Naqamtee dhufees hedduudha. garuu waanta nama aja'ibuudha.
inni kaan qaama isaa miti yoo ajjeeses kan obboleessa isaa isa oromoo garuu hedduu nama aja'iba. Medical DR dura taa'aan hospitaalaa Naqamtee itti aanaaniis habasha turaan isaaniis ajjaja kennameef sirritti TPLF dhaaf hojiirra olchaani. Sababa icciti sana awwaluuf feedhaaf dhukkubsataa rasaasii keessa jiruu yaaluu didaan. iddoo tokkotti walitti qaban
Uummataa lakkoofsaa hedduu yaalaa dhabee hospitaala Naqamtee keessatti du'an, boolla guddaa keessatti gatamanii achuma hospitaalaa keessatti. saroonni nyaata gatamee achii keessa nyaatan ilmaa oromoo torbaan muraasaaf sooraa godhatani, dhugaa kana hojjeetoota hospitaalicha martii utuu arguu callisee, anis seenaa galmeessuuf ittuman fufee amma humna kooti. Median seenee gabaasee hin jiru dhugaan kun aguugamu geessee dhuma irratti voa na qunnamuu jalqabani info anarraa argachuuf anis sodaa tokko malee midhaamtoota mara bira deemee qaamaan hasoofsiisee galmeessa, suuraa fi veion deggeeruu jalqabee. achuma keessa utuun Namoo daandiitti gabaasuu bitaaman OPDO na saaxilee humna waraanaan Hospitaalaa keessatti naa qabsiisee, isaas akkan du'uutti erga naa reebaani galmee koo fi suuraa mara mana koo seenaani fudhatani. Yeroon harki koo fuuncaan boodatti hidhamee akka saree didaa ummati Burqaa jaatoo martii yaa'ee argeera. isaaniis reportarin OLF qabannee jedhani.
Isinis utuu hin beekiin maqaa koo Balay Kormee jettani dhugaan isaa garuu ana. yemmuu website irratti facaastani. achi badeen biyya ba'ee jira amma. Ani yeroo sana pharmacy baradheen turee dhugaa kana yeeron achi hojjedhuu waan ija kon argee galmeessuuf Media addunyaa akka ga’uu goodhe dirqama Oromummaa koo ba’adhen jira. Har’a garuu waan garii hojjedhe lubun Oromoo akka hafuu iyadheefi of kooti nama naa iyyatuu dhabuu ilee lammi kotiif waan hojjedhefti booneen jiradha.
Gochaa itti yaadamee, wagga 4 guutuu itii qophanii Oromoo 400 lubu baleessan kanatii yakka sanyii dugugan kan gafataman
1. PM Ethiopia waa'ee kanaaf seeraatti dhiyaachuun dirqama itti gaafataman magaalaa Naqamtee seeraatti dhiyaachuun dirqama.
2. Dr Mokonnon golaasaa seeraatti dhiyaachuun dirqama. Itti gaafataman hospitaalaa naqamtee yeroo sana seeraatti diyaachuun dirqama fi kkf;
3. Gandoota Nannoo Oromiya jiran sun hundii gochaa sanyii baleesuti gafatamuu qabuu;
4. Investrii jeedhan Tigre fi Amharii Meesha Gumuziin hidhachisa Oromoo ficisisan Oromiyaa keessa jiratuu jarii kun murtiti dhiyachuu qabuu; Gala Gadayi jedhamuun hadheeffatama turaan abbaa qabeenya BGI Naqamtee, fi Ayyalee daabboo, Sebsibee,... inveesteerooti kun meeshaa qonnaa fakkeessani meeshaa hedduu wajjiin polissi magaalaa naqamtee boombii fi kilash baarmeela sakkatta'ee argeera, mercedisii SEBSIBEE mucaan isaa konkolaachisuu mana hidhaa Naqamtee turee ragaadha. Jara kanatuu Oromoo ficisise
5. Warra Oromoo du’ee bayy’ina isaa dhokise hojjetoota Hosptala fi Ogannota Godina dabalatee:
Yaada dabalataaf voa sagaleen kan deggeramee seenaa dhugaa kan telef waraabame jiiru. website google- search Mass massacre in east wollega.
Nu warii Oromoo lubu hanbsuuf iyyaneef Midi’ati dubatan jeedhamnee torchi goodhamnee biyya baneee, fafacannee, ni dachana bilisomnee;
Amenti fufa ykn Balay Kormee
Bakka Jiruu irra